User Post Public Post Admin Post
Frame2D Truss2D AndroCAD BQApp
Graph ဆိုတာ သင်္ချာဘာသာရပ်တခု ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်စုစည်းမှု နည်းစံနစ်တခုလို့လည်း သတ်မှတ်ပါတယ်၊ Graph ဆိုတာနားလည်ဘို့ဆိုရင် #Set လို့ခေါ်တဲ့ အချက်အလက် (data) အစုအဝေး ကနေစပြောရင်နားလည်နိုင်ပါတယ်။
Set(အစု) ဆိုတာ အစီအစဥ်တကျ မရှိတဲ့ အချက်အလက်အစုအဝေးပါ၊ Set နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သီဝရီ တွေကိုတော့ လူအများသင်ဘူး ကြားဘူးကြပါတယ်၊ ဘယ်မှာ အသုံးချသလည်းဆိုတာကို တော့သိသူနည်းပါမယ်၊ ထင်ရှားတဲ့ အသုံးချမှုကတော့ #Sorting ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားရာမှာသုံးပါတယ်၊
ဥပမာ … ကျောင်းသားများ အစုအဝေးတခုမှ ဥပဒေသများအသုံးပြု၍ ကျောင်းသားများကို သီးခြားအုပ်စုများ ခွဲခြားခြင်းပါ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျောက်သူများအနက် ဘာသာရပ်အလိုက်အမှတ် စိစစ်၍ ၎င်း၊ ဘာသာရပ်အတန်းများ၏ လက်ခံနိုင်သော အရေအတွက် အရ၎င်း၊ လျောက်ထားသူ၏ဦးစားပေး အစီအစဥ်အရ၎င်း၊ တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရမည့် သင်တန်းအုပ်စုခွဲခြားပေးခြင်းသည် sorting process တခုဖြစ်ပြီး အစု သီဝရီများကို အသုံးချနိုင်သည်။
#Graph သည် #Set(အစု) တခုဖြစ်ပြီး ထူးခြားသည်မှာ အစုဝင်များအချင်းချင်းတွင် ဆက်စပ်မှု (#relation) ရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ ဥပမာ နိုင်ငံအတွင်းရှိမြို့များသည် အစု တခုဖြစ်ပြီး မြို့များသည် လမ်းများနှင့်ဆက်ထားကြသည်၊ မြို့များသည် အစုဝင် #Nodes များဖြစ်၍ ဆက်စပ်သောလမ်းများသည် #Edges များဖြစ်ကြသည်၊ မြို့များကို nodes အနေနှင့်၎င်း လမ်းများကို မြှားပါသော edges များအနေဆွဲထားသော ပုံသည် transportation network တခုဖြစ်ပြီး Graph ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အလားတူ civil network system များမှာ ကုန်းလမ်းကြောင်းကွန်ရက်၊ ရေလမ်းကြောင်းကွန်ရက်၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းကွန်ရက်၊ မြို့ရေပေးဝေရေး ကွန်ရက်၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ရက်… စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
DFS: Traversing Depth First Search Algorithm
BFS: Traversing Breadth First Search Algorithm
DIJKSTRA Algorythm: Minimum cost spanning algorithm.
DIJKSTRA value may be any of cost, travelling distance, fuel consumption or any value like cost.
MST: Minimum Spanning Tree. Prime's Algorithm.
DEMO: ကို လင့်တွင်ကြည့်ပါ၊ DEMO Source code ကို အောက်ပါလင့်တွင်ယူပါ၊ Source Code
#Graph class implementing several algorythm such as #DFS, #BFS, #DIJKSTRA and #PRIME.
© StructSoftLab. All rights reserved.
Developed by Win Aung Cho (StructSoftLab)